အသက် ၂၅ နှစ် - ကျွန်ုပ်သည်အသစ်စက်စက်လူသားတစ် ဦး (HOCD - ED) - သင်၏ Brain On Porn ကဲ့သို့ခံစားရသည်
အသက် ၂၅ နှစ် - လူသစ်တစ်ယောက်လိုငါခံစားရတယ် (HOCD - ED)
သတိပေးချက် - ဒီနေရာမှာဖြစ်နိုင်ခြေအစပျိုးမှုတွေရှိတယ်၊ အထူးသဖြင့်သင့်မှာ HOCD (သို့) trans fetish ပစ္စည်းတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိရင်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာများကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သောကြောင့်အစပျိုးသူများသည်ဤတွင်ရှိနေသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေကကူညီချင်တယ်, ငါယနေ့ငါဒီမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်မယုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မင်းရဲ့နှလုံးသားကိုယူနိုင်ဖို့ငါမင်းရဲ့ပုံပြင်ကိုပြောပြဖို့လိုတယ်။
ဒါဟာတကယ်ရှည်လျားလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီ post အတွက်ချမှတ်ခြင်းအတွက် 10 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအဖွင့်, တံဆိပ်ပေါ်တက်မတက်ပါနဲ့…။ လွန်ခဲ့သောခြောက်လတွင် ၇ ကြိမ်တွေ့ခဲ့ရပြီး ၁၂၃ ရက်လုံးလုံးရှိခဲ့သည်။ ငါအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လွန်ခဲ့သော ၄ ရက်ကပြန်လည်နေရာချထားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနဲ့ porn နဲ့ MO ဝေးကွာခြင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဝက်အတွင်းမှာတသမတ်တည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်မအဖြစ်အစောပိုင်းငါမှတ်မိနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ကနေအမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ငါ Pre-သူငယ်တန်းအတွက်4ခဲ့သောအခါငါမိန်းကလေးငယ်များကိုနမ်း။ ငါဖြောင့်ဖွင့်ကိုငါတစ်ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်ပေါ်မှာတစ်အဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုငါမြင်၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လျက် ရုပ်မြင်သံကြား။ အကြှနျုပျ၏6သို့မဟုတ်7နှစ်အရွယ်မိမိကိုယ်ကိုအဆိုပါပောက်သံအနက်ရောင်နှင့်ကစားခဲ့သည့်ဝက်မြင်နိုင် Cinemax ၏အဖြူရောင်အထိရောက်ခဲ့တဲ့, နှင့်ပြွန်ရုပ်မြင်သံကြား၏ဖန်မျက်နှာပြင်လျက်။
ငါသည်ငါ့အစ်ကိုကျန်ရစ်ခဲ့ရာရှာတွေ့မယ်လို့သကဲ့သို့ငါ, ဖြစ်ကောင်း 10 အခါညစ်ညမ်းမှာရှာနေတော့တာပဲ။ 13 မှာသို့မဟုတ်ဒါ FAP ဖို့သင်ယူခဲ့တယ်။ တချို့အရူး Shit ကိုမြင်တော်မူ၏။ ဤသည်ကိုပြန်သင် Limewire အတွက်သမျှအဘို့ရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းအခါအင်တာနက်များ၏ရိုင်းအနောက်ဘက်နေ့ရက်ကာလ၌ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအနေဖြင့်ဘာပဲငါဆိုလို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။
တစ်ဦး 10 နှစ်အရွယ်ဦးနှောက်အဘို့မကောင်းပါဂျူဂျူ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါခက်ခဲဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါလိင်တူချင်းစကားပြောခန်းတွေထဲကိုဝင်သွားတယ်။ (ဘာလို့လဲဆိုတော့ AIM chat rooms မှာမိန်းကလေးတွေဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ဖူးလို့ပါ။ ) ငါ ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာလိင်ပြောင်းစ်ကိုစကြည့်တော့တာပဲ။ Yah, ကျွန်တော်တို့ဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူချိန်းတွေ့တဲ့ site တစ်ခုမှာသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ ကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်မှာသူမဖုန်းနဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့စကားပြောနေတာပါ။ ကျွန်မရဲ့အသက်အကြောင်းကိုလိမ်ပြောပြီး…။ သူမကိုကျွန်ုပ်၏မြို့တော်သို့သွားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နီးစပ်အောင်စည်းရုံးခဲ့သည်။ အရူးပစ္စည်း။ ငါဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုနာရီဝက်လောက်စဉ်းစားနေတယ်။
ငါအမြိုးသမီးမြားကိုသတိပွုမိရပ်တန့်ဘယ်တော့မှငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ယောက်ျား, ကိုသတိပွုမိစတင်ခဲ့တာပါ။ ငါလမ်းဆင်းလမ်းလျှောက်သည့်အခါကျွန်မလမ်းအတွက်ယောက်ျားသတိပြုမိခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲအမြိုးသမီးမြားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးငါ, ညစ်ညမ်းပညာ watched အထီးမအင်္ဂါရှိခဲ့ပါတယ်။
Oh, ငါတံစို့-lube သေခြင်းတရားချုပ်ကိုင်ထား, 3-4 ကြိမ်နေ့, နိမ့်ဆုံးကနေတဆင့်ငါ့အရေဖျားလှီးခြင်းကိုလိင်တံ၏ desensitization ဖော်ပြထားခြင်းခဲ့တာလဲ ထာဝရဘုရားကို။ များလွန်းသော။
ဒါကြောင့်တကယ့်မိန်းကလေးငါ 17 ခဲ့သောအခါအကြှနျုပျအပျေါသို့ဆင်းသွားရရန်ကြိုးစားခဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျွန်မဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 20 စက္ကန့်အတွင်းအားလျော့သွား၏။ သူမကြိုးစားခဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နောက်တဖန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး“ ငါ blowjobs ကိုမကြိုက်ဘူး” လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုမပြုခြင်းရဲ့အရှက်ကွဲခြင်းကိုရှောင်ရှားစေတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့အရွယ်ကမိန်းကလေးအများစု - ဒါအများစုအတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်တာ - သူတို့ကိုပေးတာကိုမကြိုက်တာ၊ ဒါကြောင့်သူတို့စိတ်မထင်ခဲ့ဘူး။
ဤသည်ကတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့, ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့သူမရဲ့နှပေါ်မှာငါ့ကိုဒီထက်မှနျကွောငျးဝနျခံသော, ငါ့ကိုယ်ပိုင်မအင်္ဂါများနှင့်အလိုဆန္ဒများနှင့်အတူယုံကြည်မှုနှင့်ပိုပြီးအာရုံစိုက်စေခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူမိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်ဦးလိင်တံခဲ့အခါလကျအောကျခံမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သကဲ့သို့ငါ၏အ trans ဆိုတဲ့စွဲနှင့်အတူကြင်ဤသည်မထိုက်မတန်။
ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတို (ဤသည်မှောင်မိုက်လာတော့မည်။ စိတ်မကောင်းပါ)… .this ကငါအသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးခင်အထိမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးရှိရန်… ..start ဖြစ်သည်။ ၆ လကြာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်ကျွန်တော်ဟာ fap free (ဂယ်ရီ Wilson ဒါမှမဟုတ် NoFap ကိုမတွေ့ခင်လမ်း) နဲ့ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်စိတ်နိုးထမှုနည်းပါးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ပုံမှန်ထိခိုက်လွယ်သောအခြေအနေသို့ပြန်ရောက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်စိတ်နိုးထမှုနည်းပါးသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏အလိုဆန္ဒများသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေသို့ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူမသည်အခြားမြို့တစ်မြို့သို့ထွက်သွားပြီးနှစ်ပတ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ယုန်တွင်းထဲသို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပြန်ရောက်လာသည်။ trans ဆိုတဲ့မိန်းကလေးနှင့်အတူသူမ၏အပေါ် cheat ။ အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးရှိသလား။ မိန်းကလေးနှင့်ဆက်ဆံရေးပျက်ပြား သူမ၏မိဘများကတရားမျှတစွာကျွန်ုပ်ကိုသတ်ချင်ကြသည်။ ကျွန်တော့်မိဘတွေအကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်နေကြတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေလုနီးပါး ကျန်တဲ့သူ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာသူမကိုအိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးနဲ့မထားချင်တော့လို့ပါ။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ငါတို့နှစ် ဦး လုံးကျန်းမာနေတယ် ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရဘူး။ ငါစိတ်ကျရောဂါ, အဝလွန်ခြင်း, PMO သို့လှိမ့်ခြင်းနှင့်ကျရှုံးခြင်းမှအောက်ခြေကျောက်သို့အောက်ခြေကျောက်တန်းအောက်ခြေ, ထို့နောက်အခြားပြီးတော့အခြားသို့တုန်လှုပ်။
ရှေ့သို့3နှစ်အစာရှောင်။ ကျွန်တော်ပေါင် ၃၀၀ ပါ ငါပြီးပြည့်စုံသော slobs နဲ့တူနေထိုင်နေပါတယ် ကျွန်ုပ်ဘဝသည်အိပ်ရာမှထ။ လူတစ် ဦး ချင်းစီသို့ကူးပြောင်းရန်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှာ၊ စားခြင်း၊ အင်တာနက် drive တွင်လိင် drive ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်လုံလောက်သည့်တိုင်အောင်အိပ်ပျော်ရန်ပင်ပန်းသည့်တိုင်အောင်ပြန်လုပ်ပါ။ ပြန်လုပ်ပါ
ငါ Paleo အစားအစာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အလေးချိန်တစည်းဆုံးရှုံးသည်။ အလွန်လွန်ကဲစွာဖြတ်သန်းသွားပြီးညစ်ညမ်းကြယ်တစ်ပွင့်နှင့်တူသော trans မိန်းကလေးရအောင်ကြိုးစားပါ။ ငါ 8 နှစ်များအတွက်လိုချင်ခဲ့ဘူးတော်တော်များများ။ သူမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအားလုံး၌သူမအရသာသည်ငါထင်သည်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါသူမနှင့်အတူတစ်စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလို့မရပါဘူး။
ဂူဂဲလ် -> ယောက်ျား ၂၀ မှပြrectionနာများ -> ဂယ်ရီ Wilson က Ted Talk ကို -> အေ့ဟေ! ခဏ
ငါရှာနေငါဆက်ဆံရေးကိုအပေါငျးတို့သထံမှခြေလှမ်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်အာရုံစိုက်ဖို့အချိန်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်၏အစားအစာကိုခေါ်ဆိုပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းစတင်ပါ။ လုံလောက်သောနှင့်ပုံမှန်နာရီများတွင်အိပ်။ ပုံမှန်ဖြုန်းတီးခြင်း။ ပိုကောင်းတဲ့အဝတ်အစား။ ငါ့အိပ်ရာခင်း။ ငါ၏အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်။ ကျွန်ုပ်၏ပန်းတိုင်အလေးချိန် (ပေါင် ၃၀၀ မှ ၁၃၆ ကီလိုဂရမ်မှ ၁၉၂ မှ ၈၇ ကီလိုဂရမ်အထိ၊ အမြင့် ၆'၀″ [၁၈၃ စင်တီမီတာ) အထိ) သို့ရောက်ရှိသွားသည်။ ဗီရိုအသစ်တစ်ခုဝယ်ပါ။
ငါ NoFap Streak4လကိုနှိပ်ပါ။ ဤအချိန်အတောအတွင်းတွင်၎င်းသည် ၁၀၀% နီးပါးပြားပြားဖြစ်သည်။ အလွန်စိတ်ပျက်စရာ။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် မှစ၍ အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုမတုံ့ပြန်ခဲ့ပါ။ အခုအသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ရက်ပေါင်း ၁၂၀ သေပြီ Dude ... ငါ့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိလား။
desensitization အကြောင်းကိုအချို့သောပိုပြီးပစ္စည်းပစ္စယရှာဖွေပါ။ ငါ၏အလိင်တံ၏ပိုကောင်းစောင့်ရှောက်မှုယူပြီးစတင်ပါ။ sensitivity စသည်တို့ကိုငှက်မွှေးနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေး, ငါသည် start အခါ, စာသားငါ ကို AT အားလုံး, MY လိင်တံ၏ခေါင်းပေါ်မှာငှက်မွှေးမခံစားရနိုင်သလား။ ငါရေးလိုက်တာကိုမင်းဖတ်ဖူးလား လိင်အပျော်အပါးအတွက်အထိခိုက်မခံဆုံးနေရာဖြစ်သင့်သောကိုယ်အင်္ဂါ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုအမွေးရှိသည်ဟုခံစားရနိုင်သည်။ ဒါကပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေမှာဘာကြောင့်ဒီလောက်ခက်နေရတာလဲဆိုတာကိုနားလည်စေတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ငါဘာမှမခံစားရဘူးလေ။
မှန်မှန် moisturize မှစတင်ခဲ့သည်နှင့် sensitivity ကိုတိုးတက်အောင်ခံစားရတယ်။ ကောင်းစွာအစာစားခြင်း, ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေ, etc Continue
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်မြန်ရှေ့သို့ ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် သူမသည်နည်းနည်းကြီးပြီးစမတ်ကျသည်၊ ထိုအရာများသည်ငါနှင့်အတူထိတွေ့လေ့ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကချွတ်နှိပ်ပါ။ အမှုအရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရင်ခုန်စရာလမ်းကိုဆင်းသွားနေကြသည်။ ငါစွမ်းဆောင်ရည်တွေနှင့်လူများသည်ငါ့အတိတ်ကို“ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း” နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ရန်ငါငြီးငွေ့နေသည်ဟုဆုံးဖြတ်သည်။
သူနားလည်တယ် ညစ်ညမ်းမှုသည်လူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုပျက်စေသည်ဟုသူမထင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည် (၄) လအတွင်းကျွန်ုပ်၏ဘဝလက္ခဏာကိုပြသခြင်းမရှိသေးပါ။ သူမသူမကိုထိုးဖောက်နိုင်သည့်သူတစ်ယောက်လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အချိန်အကြာကြီးမဖြစ်နိုင်ပါ။ အေးဆေးပဲလို့သူကပြောပါတယ်
ကျနော်တို့ထွက်ဆွဲထားစတင်ပါ။ သောကြာနေ့ညငါတို့လမ်းလျှောက်ထွက် ငါဒီမိန်းမအကြောင်းသိသမျှအကုန်ချစ်တယ် ထွက်အောင်, ငါ့အရပျမှာတက်အဆုံးသတ်။ ငါခက်ခဲ Rock ဖြစ်၏။
အဘယ်သို့နည်း, ငါထွက်အောင်ခဲယဉ်းလား? ဒါကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ် ငါဒီမှာဆယ်ကျော်သက်ကဲ့သို့ခံစားရတယ် ဒါကိုတူးတယ်
အိပ်ရာထဲမှာထပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်။2AM မှာနှိုး။ တဖန်ထွက်အောင်စတင်ပါ။ အမှုအရာအပူရ။ သူမသည်သူမ၏အမျိုးသမီး -bits မှငါ့လက်ကိုလမ်းပြ။ သူမဘယ်လောက်စိုစွတ်တယ်၊ ငါလမ်းလျှောက်ထွက်သွားနိုင်အောင်ငါသူမကိုခံစားရတယ်၊ ငါအရမ်းခက်တယ်။ ငါအရမ်းဆိုးချင်တယ်။
ယောက်ျားများကိုသတိရပါ၊ ကျွန်ုပ်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်လောက်ကျွန်ုပ် ဦး နှောက်သည်ယိုယွင်းပျက်စီးသွားသောကြောင့်ယောနိ၏အတွေးသည်ကျွန်ုပ်ကိုရွံရှာဖွယ်ကောင်းပုံရပါသည်။ ငါဆိုလိုတာကသန့်ရှင်းလား အနံ့လား အဲဒါဟာပါးစပ်နဲ့တူလား။ penises လက်ျာဘက်နိမ့်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်ကြသည် အလေးအနက်ထား…ငါဖြောင့်မတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ၊
ငါသည်ဤမိန်းကလေးသို့ငါ၏အလက်ညှိုးကိုချော်နှင့်သူမ၏လိင်အင်္ဂါအကြှနျုပျ၏စိတျထဲတှငျကျေးဇူးတုံ့ပြန်ညစာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါကလိုချင် so မကောင်းတဲ့။
ဒါကြောင့် ...Omnomnomnomnomnom ။
ပြီးခဲ့သည့်ညကသူမပြန်လာသည် သူမသည်ညာဘက်ထဲသို့ရရှိသွားတဲ့။ သူမသည်ငါ့ကိုမပြောပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီတွေပိတ်နေပြီးသူမငါ့ကိုပါးစပ်နဲ့အော်နေတယ်။ ငါကခက်တယ်၊
ဤသူကားငါ၏တစ်ခုလုံးကိုအသက်တာ၌တစ်ကြိမ်, ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်! လေးပုံတပုံရာစု၌တည်၏။ ကျွန်တော်ပြောတာကြားရဲ့လား?
၁၅ မိနစ်ကနေ ၃၀ မိနစ်လောက်မှာလိင်ကိုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်လိင်ဆက်ဆံတာပါ။ ငါအော်ဂဇင်ကိုမပြုခဲ့ဘူး။ ငါလုပ်မယ်ငါသိတယ် ဒါပေမယ့်ယောက်ျားတွေ၊ ငါအချိန်ကာလကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါရှိခဲ့သမျှငါစိတ်ကူးယဉ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂျအတူ, ထိုအချက်အထိ။ နောက်ဆုံးညဥ့်အချိန်ကုန်လွန်ပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့်နှင့်ကျွန်တော်အင်္ဂါဇာတ် penitration တစ်နာရီခန့်ကြာအောင်ကြိုးစားခဲ့သည်။
ပြီးတော့အံ့သြစရာကောင်းတာကတစ်ချိန်လုံးသူမကအာရုံစိုက်နေတယ်။ တစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကူးမထားပါနဲ့။ ငါသူမကြည့်နေတယ်၊ ​​နမ်းတယ်၊ သူမမျက်လုံးမှာကြည့်နေတယ်၊
ယောက်ျားတွေတစ်ဦးလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျနော်အလေးအနက်ထားသတ်သေခဲ့ပါတယ်။ ငါနှစ်ခုလမ်းသွားလမ်းတွေချမောင်းနှင့်အလေးအနက်ထားတမင်တကာတစ်လမ်းကွေ့များသည်မျက်နှာချင်းဆိုင် 18-Wheeler သို့ဦးခေါင်း-on ကိုသွားစဉ်းစားလိမ့်မယ်။ ဒါကနောက်ဆုံးမှာရုံစျြလြူရှုမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်သို့အောက်အဆင့်များသို့ခွဲဝေ။
ငါအားလုံးထဲကရတယ်။ ကျွန်ုပ်အလုပ်နှင့်ကိုယ်ခန်ဓာကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရုံတင်မကကျွန်ုပ်၏လိင်နှင့်လိင်တံကိုပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ငါရေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမင်းဖတ်ဖူးတယ်။ ငါဘယ်လောက်အထိပျံ့နှံ့သွားတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ ငါဒီနေ့ဒီအခိုက်အတန့်ကိုရောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ငါကတိပေးခဲ့တယ်။
သွားရမယ့်နည်းလမ်းတွေရှိသေးတယ်။ ငါအိမ်မှာမရှိသေးဘူး သို့သော်ကျွန်ုပ်၌ဂရုစိုက်တတ်သော၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားကိုသိသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကျွန်ုပ်ရရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ဤသစ်ရွက်သစ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ငါ သိ ငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာငါတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာ - သွေး - အမျိုးသမီးအဖော်နှင့်အထွတ်အထိပ် - ငါလုပ်မယ်။
ငါသိပြီ၊ ပြီးတော့ ၂၀၁၂ မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရလိမ့်မယ်။ ငရဲ, မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်၏အတွေးရုံမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။
လူသစ်တစ်ယောက်လိုငါခံစားရတယ်။ ငါဘယ်တော့မှမသိဘူးဆိုတာငါသိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့အလိုဆန္ဒ။ အားလုံးမဆိုအပြစ်ရှိတယ်မပါဘဲ။
ကျေးဇူးပြုပြီးယောက်ျားတွေ သင်၏အသက်တာသည်တန်ဖိုးရှိပြီးသင်တွင်းထဲမှထွက်နိုင်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည်။ မင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့မင်းကတိပေးခဲ့တယ်
ဂယ်ရီ Wilson ၏ Ted ဆွေးနွေးချက်
YourBrainOnPorn.com - ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောသတင်းအချက်အလက်
Paleo အာဟာရဆိုင်ရာနိယာမများ - NoFap သည်အလွန်လှပသော၊ သဘာဝမဟုတ်သည့်လိင်အလေ့အကျင့်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားသကဲ့သို့ Paleo သည်အလွန်မြင့်မားသော၊ ဒီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ primer အထဲကစစ်ဆေးပါ။
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအစာရှောင်ခြင်း - သင်သည်သင်၏အဆီဆုံးရှုံးမှုကိုအရှိန်မြှင့်လိုလျှင်, ဒီ primer အထဲကစစ်ဆေးပါ။
ရွေ့လျားလေ့ကျင့်ရေးအတွက်ကယ်လီ Starrett ၏ဗီဒီယိုများ။ သူဘာတွေပြောနေသလဲဆိုတာသိရန်ဤအင်တာဗျူးကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ သူ့စာအုပ် တစ်ဦးပျော့ပျောင်း Leopard ဖြစ်လာခြင်း လူ့လှုပ်ရှားမှု၏ကမျြးစာကိုဖြစ်ပါတယ်။
မလိုလားကြံခိုင်ရေး အရင်ကဆိုရင်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ bodyweight လေ့ကျင့်ခန်းရှိပါတယ်။
မာ့ခ် Rippetoe ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိစတင်ခြင်း ခွန်အားလျော်သောရုတ်သိမ်းဖို့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆက်စကားဖြစ်ပါတယ်။ သူ့စာအုပ် အစွမ်းသတ္တိသင်တန်းများအတွက်လက်တွေ့ Programming တစ်ဦးကောင်းနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါတယ်။
David Allen ရဲ့ အရာ Done တဲ့
ချားလ်စ် Duhigg ရဲ့ ကျင့်ကို The Power of
မာ့ခ် Manson ရဲ့စာအုပ် မော်ဒယ်များ။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်မည်သို့အခြားသူများမိမိကိုမိမိအကြောင်းကိုအမှန်တရားထုတ်လွှင့်နိုင်သူယောက်ျား၏ကြင်နာသို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နားလည်သဘောပေါက်အပေါ်တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့စာအုပ်။ မယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသောစာအုပ်။
လိင်တံ sensitivity ကို Restoring
Kegel လေ့ရှိသည်။ သူတို့ကိုလုပ်ပါ။
Man1 လူသားရေနံ။ ငါပုံမှန် moisturizer သုံးပြီး, ဒီအသုံးပြုခဲ့သည် နိုင် plaċeboဖြစ်, ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ဒီ lotion ကနေအကောင်းဆုံးပြန်လာသတိထားမိတယ်ထင်ကြဘူး။ သို့သော်ဘာမှမထက်ပိုကောင်းတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံလျှင်၊
TLC Tugger အရေခွံ။ သင်၏အရေဖျားလှီးခြင်းခံရလျှင်ပင်သင်၏လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းကိုဖုံးအုပ်ရန်သင်၏အရေဖျားကိုရှေ့သို့ဆွဲထားပါ။ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြီးမားသောကြီးမားသောခြားနားချက်။
TL; DR - ငါ့ရဲ့လိင်တံနဲ့ ဦး နှောက်ဟာပျက်စီးသွားပြီလို့တွေးပြီးငါ့ဘ ၀ ရဲ့ရှစ်နှစ်တာကာလကိုကုန်ဆုံးစေခဲ့တယ်။ ငါပြီးပြီ အကယ်၍ ၎င်းသည် GTFO ကိုဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းနှင့်မထိုက်တန်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကတစ်ယောက်ယောက်ကိုဒီအကြောင်းပြောပြဖို့ငါ့လက်ဝဲဘက်အခွံကိုငါပေးပြီ
Edit: ရွှေ! အလေးအနက်ထားပြောရရင်ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ ယောက်ျားတွေဟာငါနဲ့အတူတူပဲ၊ ငါ့ဇာတ်လမ်းကမင်းကိုလွတ်မြောက်အောင်ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အဲဒီရာထူးကိုမ ၀ င်မိအောင်သိရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာရဲ့ကမ်းခြေကို ဦး ဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးမျိုးဆက်ပါ၊ ငါတို့ဘာမျှော်လင့်ရမှန်းမသိခဲ့ပါဘူး။ ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိတယ် ဒါပေမယ့်ဒဏ်ရာရပေမယ့်အသတ်ခံရတာမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့သတိနှင့်ဘဝမှာတ ဦး တည်းရိုက်ချက်ရ ... ဒါကြောင့်လည်းရွှင်လန်းခြင်းနှင့်လှပသောနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်ထက်ဒီအလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ဖို့အချိန်မပိုပါဘူး။ အားလုံးကံကောင်းပါစေ။
LINK - 25 နှစ်ရှိပြီ။ PIED နှင့် HOCD obsessive ၏ 8 နှစ်ပေါင်း။ ငါနောက်ဆုံးညဥ့်ဂရုစိုက်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သညျ။ ငါသည်ဤလုပျနိုငျလြှငျ, မည်သူမဆိုနိုင်ပါတယ်။